ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား: ဓမ္မ အတွေး၊ ဓမ္မ အရေး
မြေတစ်ပြင်လုံး၌ ဧကရာဇ်မင်း ဖြစ်ရသည်ထက် လည်းကောင်း၊ နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ရောက်ရသည်ထက် လည်းကောင်း၊ တစ်လောကလုံးကို အစိုးရသည်ထက် လည်းကောင်း သောတာပန် ဖြစ်ရခြင်းသည် မြတ်၏။ (ဗုဒ္ဓ)
ဓမ္မ အတွေး၊ ဓမ္မ အရေး
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနည်းလာလေ လွတ်လပ်ခြင်းတွေကို ပိုပိုပြီးပိုင်ဆိုင်လာလေ
ဆိုတာက ဘ၀ရဲ့သဘာဝတစ်ခုပါဘဲ။ ဘ၀သဘာဝကို လွန်ဆန်ဘို့ကြိုးစားသူတိုင်းလည်း ဘ၀ရဲ့သဘာဝ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဆုံးရှုံးသွားကြရတာလို့လဲနားလည်မိတယ်။ စွန့်လွှတ်နိုင်ဘို့ကြိုးစားခြင်း ဆိုတာကိုလည်း ဘ၀သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းလို့လဲ သက်ဝင်မိပါတယ်။ ဘ၀သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား at 9:13 PM
Labels: ဓမ္မအတွေး၊ ဓမ္မအရေး
ခန္ဓာအိမ်ကို ဆောက်လုပ်တတ်သော ဟယ် တဏှာလက်သမား၊ ငါသည် သင့်ကို (ပညာမျက်စိဖြင့်) ယခု မြင်အပ်ပြီ။ ခန္ဓာအိမ်ကို နောင်တစ်ဖန် သင်ဆောက်လုပ်ရတော့မည် မဟုတ်၊ သင်၏ ကိလေသာတည်း ဟူသော အခြင်ရနယ် အားလုံးတို့ကို (ငါ) ချိုးဖျက်အပ်ပြီ။ အ၀ိဇ္ဇာ တည်း ဟူသော အိမ်အထွတ်ကို ဖျက်ဆီးအပ်ပြီ။ (ငါ၏) စိတ်သည် ပြုပြင်ခြင်း ကင်းရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ။ တဏှာကုန်ရာ ကုန်ကြောင်း အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရပြီ။ (မြတ်ဗုဒ္ဓ)
၀ိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဆိုတာ တခြားမှတ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့သန္တာန်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ဝေဒနာဖြစ်စေ၊ စိတ်ဖြစ်စေ ပေါ်ချင်တာပေါ်လာပါစေ၊ စားချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ချင်လဲ ပေါ်ပါစေ၊ အိပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေး ပေါ်ချင်လဲပေါ်ပါစေ၊ ငိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ချင်လဲ ပေါ်ပါစေ၊ ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကလေး ပေါ်ချင်လဲပေါ်ပါစေ၊ပေါ်တာ နောက်ကနေပြီးသကာလ ဒီဓမ္မလေး ဟာ ဖြစ်ပြီးပျက်တဲ့ အနိစ္စပါလားလို့ ရှုဖြစ်အောင် ရှုပေးပါ၊ ဒါ ၀ိပဿနာဖြစ်တာပါပဲလို့ မှတ်ပါ။ ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်ပြီး ပျက်တာကိုသာ ဒကာ ဒကာမတွေ ဉာဏ်ဦးတည်ပေးမယ်ဆိုရင် ၀ိပဿနာ သမ္မာဒိဋ္ဌိဧကန်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်...... (မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြိး)
ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်။ နာမ်က ခံစားတယ်။ ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှ နာမ်ကခံစားတာ။ နာမ်၏လက္ခဏာခံစားပြီးပျက်တာကိုသာသိ၊ အဲဒီ ပညာသိလေးရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သေရင်လည်းစိတ်ကလေးအပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ တရစပ်ကြီးအသိလိုက်နေရမှာ။ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ မကြောက်နဲ့။ အသိမလိုက်မှာကြောက်၊ ရှေ့စိတ်ကတော်ချင်ရင်၊ နောက်စိတ်ကတွန်းတင်။ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ရဟန္တာဆိုတာ စိတ်ပဲ။ စိတ်သိချင်ရင် အလုပ်လုပ်ကြ။ သူများစိတ်ကျော်မစစ်နဲ့၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ်။ သူများအပြစ်မရှုနဲ့ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ရှု။ အပြောသမားမဖြစ်စေနဲ့၊ အလုပ်သမားဖြစ်ပါစေ။ သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး
ှ“ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရလိမ့်မယ်။ ထိမှု၊ သိမှု ထိုနှစ်ခု သတိ ကြပ်ကြပ်ပြု။ မရှိတာထက် မသိတာ ခက်တယ်၊ မသိတာထက် မသိချင်တာ ပိုခက်တယ်၊ မသိလျှင် သိအောင်လုပ်ပါ။ အရိယာတွေဖြစ်ဖို့ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။” ”သူတော်ကောင်းလုပ်ရတာလူ.ဘ၀မှာအောက်ဆုံးကဘဲ ခြင်တောင်ကြောက်ရတယ်ကွ သူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ်ကသာအနစ်နာခံ အရှုံးပေးရတယ်ကွ” ”မြေကြီးကိုဖနောင်.နဲ.ပေါက်တော. ဘယ်သူနာသလဲ..ဖနောင်.နာပါတယ်ဘုရား...အေးဘယ်လိုပြောပြောဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကိစ္စမရှိဘူး မြေကြီးလိုသည်းခံနေရတယ်” (စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး) (Htar Htar Moe @ Facebook.com မှ ကူးယူပူဇော်ပါသည်)
“တရားတော်ကြီး က အနိစ္စ...လို.ဆိုတယ်။ ဒုက္ခကို ..သုခ အလိမ်ခံရတယ်၊အနတ္တ ကို...အတ္တ လို. အလိမ်ခံရတယ်၊အသုဘ ကို...သုဘလို. အလိမ်ခံရတယ်၊သညာအလိမ်ခံရလို...နင် ဒုက္ခရောက်တယ် ၊ခန္တာကိုယ်ရှု. သတိပဌာန်လေးပါးရှိပြီ” စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီး ဦးက၀ိ(Htar Htar Moe @ Facebook.com မှကူးယူပူဇော်ပါသည်..)
အများနားလည်အောင်ပြောရမယ် ဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်ရှားတဲ. အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်တဲ. နှာဖျား နှာဝမှာ ထွက်လေ၊၀င်လေ နှစ်ရပ်ဟာ အမြဲတိုက်ဝင်၊ တိုက်ထွက်နေတယ်။နှာဖျား နှာဝမှာ ကာယပသာဒ အကြည်က အထိခံ၊ ထွက်လေ၀င်လေဖြစ်သော ဖြစ်တဲ. လေနှစ်ရပ်ဟာ ၀ါယော ဖော...ဋ္ဌဗကထိတယ်။ ထိုအထိခံနဲ. ထိတာကရုပ်၊ သိတာကနာမ် ဆိုတော. ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို. သူများမေးမနေနဲ.၊ကိုယ်.နှာဝကိုဥာဏ်နဲ.စောင်.ကြည်.။ (ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး ) (Htar Htar Moe@Facebook.com မှကူးယူပူဇော်ပါသည်)
ဗုဒ္ဒသာသနာ ကွယ်ပျောက်တော.မည်ဆိုလျင် ပရိယတ္တိသာသနာ(ပိဋကတ် ၃ပုံ =သုတ် ၀ိနည်း အဘိဓမ္မ...ာ)မှ အဘိဓမ္မ ပိဋကတ် အရင်ဆုံးကွယ်ပျောက်လိမ်.မည် ။ထို အဘိဓမ္မာ ၇ကျမ်းမှာမှ သတမ္မမြောက် “ပဌာန်းကျမ်းကြီး”သည် ပထမဆုံးကွယ်ပျောက်သွားလိမ်.မည်။မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း အဘိဓမ္မာ၇ကျမ်းတွင် က်ျ ပဌာန်းတရားတော်ကြီးကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သောအခါမှ ရောင်ခြည်တော်များကွန်.မြူးခြင်းစသဖြင်. ကြီးကျယ်ခမ်းနား ကျယ်ပြန်.လှသောကြောင်.က်ျ “ပဌာန်းတရားမြတ်” အား ရှေးဆရာတော်ကြီးများသည် သာသနာကွယ်ပျောက်မည်.အရေးစိုးရိမ်စွာဖြင်.ခံတပ်ကြီးသဖွယ် တန်ဖိုးထားကြပါသည်။
အသံနဲ့ ဆွဲငင်ဟောတာ အသံတရားပေါ့ ။ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းနဲ့ ဟောရင် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း တရားပေါ့ ။ ရယ်စရာကို ဟောရင် ရယ်စရာတရားပေါ့ ။ ဘယ်က သုတ္တန်တရား ဟုတ်ရမလဲ ။ (မဟာစည် ဆရာတော်ကြီး)
~ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ကြရင် ~ လောကကြီးမှာလူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံးလို့ေ...ပြာကြတယ်။ တကယ် တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရင် ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားရမယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တရားတွေမှာ နစ်မွန်းနေရင် ချစ်ရာမရောက်၊ နှစ်ရာသာ ရောက်နေတာ ကို မသိကြရှာဘူး ။ ( မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ )
စိတ်ထားမြင့်မြတ်လျှင် ဘယ်သူမဆို အထက်တန်းစားလူ ဖြစ်နိုင်၏ ။ မိမိ၏ စိတ်ထားက အလယ်အလတ်ရှိလျှင် အလတ်တန်းစားလူ ဖြစ်ရ၏ ။ မိမိစိတ်က အောက်တန်းကျလျှင် အောက်တန်းစားလူ ဖြစ်ရမည် ။ စိတ်ရင်းစေတနာသည် လူတန်းစားကို ခွဲခြားနေသော တရားခံလက်သည် ဖြစ်လေသည် ။ (တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမသာရ)
ရိုးသား ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုတိုင်းအတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေအချိန်တိုင်းရှိမှာမဟုတ်ပေမဲ့ သင့်အတွက်တော့ အမြဲစိတ်လုံခြုံမှု ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ Ashin Tikkha
တရားတဲ့စာတွေက တရားစာ၊ တရားတဲ့စကားတွေက တရားစကား၊ တရားတဲ့အတွေးတွေက တရားအတွေး၊ တရားတဲ့အကျင့်တွေက တရားအကျင့်။ အားလုံးဟာ အကောင်းတွေချည်းပဲ။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်မသွားအောင် သတိထားလိုက်ရုံပဲလိုမယ်။ (ဒေါက်တာအရှင်ပါရမီ)
တစ်ပါးသူရဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ အပြစ်တွေကိုတောင် နားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်အောင်နဲ့ နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်အောင် ကြိုးစားဖြစ်လာလေလေ၊ သိမ်မွေ့တဲ့ မေတ္တာရဲ့ချမ်းသာကို ခံစားနိုင်လာလေလေပါ။ အရှင်ဓမ္မပါလ (ဖားအောက်တောရ)
ကျွန်တော်သည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ သာမာန်လူပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ နှင့် ဆရာတော် သံဃာတော်များ၏ တရားတော်များကို တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ဒီစာမျက်နှာလေးကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တရားပိုင်ရှင်များ နှင့်တရားချစ်ခင်သူများအကြားပေါင်းကူးပေးခွင့်ရတာကိုဘဲအထူးဝမ်းမြောက် ကြည်နှူးမိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် (ကိုမောင်မောင်)
တရားတဲ့စာတွေက တရားစာ၊ တရားတဲ့စကားတွေက တရားစကား၊ တရားတဲ့အတွေးတွေက တရားအတွေး၊ တရားတဲ့အကျင့်တွေက တရားအကျင့်။ အားလုံးဟာ အကောင်းတွေချည်းပဲ။ြေ...
သတိလေးနဲ့ နေတဲ့အခါအတွေးအတောမရှိဘူး။ အတွေးမရှိတဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့ အာရုံဟာ ဘယ်လိုအာရုံဖြစ်ဖြစ်၊ ချမ်းသာတဲ့ ဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲတဲ့ ဝေဒနာ၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာပ...
စိတ်အားဖြည့် စကားစုလေးများ (၆)
ကိုယ်ကကောင်းမှ သူလည်ကောင်းမယ်… ဘယ်သူမဆို အကောင်းကိုပဲ အလိုရှိတတ်ကြရာမှာ အကောင်းများဖြစ်စေဖို့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံး ကောင်းပြဖို့...
တစ်အိမ်ကြည့်လိုက်ပြန်လည်း မအေးရပါဘူး၊ သားလင်ခင်ပွန်းအတွက် မအေးရပါဘူး၊ သောကနဲ့၊ ဟင် - ဒကာ ဒကာမတွေ မပြန်လာလို့ မျက်ရေနဲ့ မျက်ခွက်...
စိတ်အားဖြည့် စကားစုလေးများ (၄)...
သံသရာကြွေး မတင်ပါစေနဲ့… အခုဘ၀မှာတောင် အတိတ်ဘ၀တွေက လုပ်ခဲ့တဲ့အကြွေးတွေကို ကျေအောင်မဆပ်နိုင်သေးဘဲ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မကောင်း...
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၀ိပဿနာ ရှုပုံရှုနည်း (၂)
ဥာဏ်ထဲဘာတွေပေါ်နေသတုံး ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သားတွေ၊ သမီးတွေ၊ ဆွေတွေ၊ မျိုးတွေ (ပျောက်သွားပါတယ်ဘုရား) ကိုယ့်ခန္ဓာ မှာလည်း ငါလည်းပေ...
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ တစ်ဦးတည်း မွေးဖွါးပြီး တစ်ဦးထဲသေဆုံးရတဲ့ ဘ၀ဆိုတဲ့သဘာဝကနေအပြီးရုန်း ထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ။ လောကသားတွေအတွက်လဲ ဘ၀သဘာဝကနေရ...
စိတ်အားဖြည့် စကားစုလေးများ (၁၀)
ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါ… ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ရုပ်တရား ဖောက်ပြန်မှုဟာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါးမှာ တစ်ပါးပါးကြောင့် ဖောက...
၀ိပဿနာ ရှုပုံရှုနည်း (၁)
http://www.mogokinsightny.org/publications/ ဆိုဒ်မှ ထပ်ဆင့်ယူ၍မျှဝေပါသည် ၁၁-၁၁-၆၁ ခု၊ ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်...
လုပ်သမျှကိစ္စတွေကို သတိလေးနဲ့ သိ သိပြီးတော့ နေလို့ရှိရင် အဲ့ဒီသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်က ပစ္စုပ္ပန်မှာ ရှိနေတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ရှိနေတော့ အတိတ်အြေ...
တင်ခဲ့ပြီးသမျှ September 2011 (5) October 2011 (35)
ဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရား. Picture Window theme. Theme images by enot-poloskun. Powered by Blogger.